Fanlyplas-Dedicated amin'ny plastika plastika sy ny vahaolana extrusion tsipika
： Fanondranana @fanlyplas.com
Fanlyplas! Arotsaho ny ho avinao！
Nandritra ny am-polony taona maro ny famoronana originality, Fanlyplas mitazona ny famolavolana angovo avo lenta, ambany angovo, avo kokoa ny vokatra, horonantsary plastika famokarana marin-toerana, tsipika fanamafisam-peo ary profil.
Tongasoa eto amin'ny izao tontolo izao amin'ny FANLYPLAS teknolojia extrusion!
Fanlyplas-Dedicated amin'ny plastika plastika sy ny vahaolana extrusion tsipika.
Nandritra ny taona maro nivoatra sy nanatsara hatrany ny serivisy AZ. Fanlyplas dia afaka manome anao vahaolana feno fonosana amin'ny plastika, tsipika fantsom-panafody profil.
Fanlyplas, miorina ao Shanghai, Sina. dia lasa mavitrika amin'ny tsena manerantany ho an'ny firenena 10 mahery.
Ny orinasan'ny orinasa mpamokatra orinasa dia mandrakotra 6,000 metatra toradroa.
Manokana amin'ny famokarana tsipika famokarana milina plastika izahay, miaraka amin'ny sandan'ny famoahana 5 tapitrisa dolara isan-taona.
Firenena 16 mahery eran'izao tontolo izao no nampiasa ny vokatray sy nahazo ny tolotra anay.
Hatramin'ny niorenany 16 taona lasa izay, ny orinasa amin'ny takelaka fantsona sy fantson-tsarimihetsika indrindra amin'ny vokatra busa.
PVC Tsipika Ceiling Extrusion amin'ny valindrihana
PP/PE WPC decking Extrusion tsipika
PVC WPC Tsipika fanamafisam-baravarana varavarana
PVC tsipika fantsom-panafody maimaim-poana
PVC/WPC Sombin-tsoratry ny sombin-tsolika
SPC gorodona extrusion ravina
PVC tsipika extrusion taratasy marbra
Fanlyplas-Ny safidinao vahaolana Extrusion plastika hahazoana fampisehoana sy valiny tsara indrindra.
Ny masininay dia afaka mamoaka ny ravina plastika, sarimihetsika ary mombamomba azy izay nampiharina tamin'ny faritra haingon-trano anatiny sy ivelany, indostrian'ny fananganana orinasa, indostria fampitaovana, indostrian'ny fonosana, indostrian'ny simika ary vokatra avo lenta, lanjany ambany ary vokatra matanjaka avo kokoa.
Fikarohana Inona Fanlyplas tolotra
Fanombanana ny tetikasa
Ampio ny mpanjifa amin'ny fanombatombanana ny maha-mety ny tetikasa, ny fisafidianana ny tranokala, ny refy, ny famolavolana zavamaniry, sns.
Araka ny tetik'asa, ampio ny mpanjifa hamokatra fitaovana avo lenta mandra-pahatongan'ny fametrahana sy ny fanekena
Ampio ny mpanjifa amin'ny famolavolana drafitra sy sary mifanaraka amin'ny tanjony sy ny drafiny.
Fiofanana momba ny mpiasa
Manome ny fiofanana momba ny fiasan'ny masinina, ny fikojakojana, ny troubleshooting sns ho an'ny mpiasan'ny mpanjifa.
Fanamafisana ny drafitra
Hamarino ny drafitra farany sy ny antsipiriany arakaraka ny toe-javatra feno an'ny mpanjifa
Omeo serivisy mandritra ny androm-piainana "avo lenta sy haingana ary manokana ho an'ny mpanjifa" ny mpanjifa.
Tombontsoa tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay
Esory ny fepetra takian'ny mpanjifa hanampy ny mpanjifa handrafitra ny drafitra fandrindrana ny orinasa sy ny drafitra fandaminana.
Araka ny fepetra takian'ny mpanjifa dia homenay ny mpanjifa ny drafitra fandaminana tsara indrindra.
Omeo ny mpanjifa serivisy matihanina amin'ny famokarana fitaovana sy raikipohy
Blog sy lahatsoratra farany
PE / PP ivelany WPC Masinina / Fitaovana / Famokarana Extrusion
Fizahan-takelaka WPC Fampidirana ny vokatra Ny tombony azo avy amin'ny WPC Prospectan'ny tsena matanjaka an'ny WPC Fampiharana WPC Fitaovana ivelany WPC Ny fizotry ny famokarana, ny fizarana sy ny fizahana
Fanadihadiana sy fanoherana ny antony mahazatra mahatonga ny sela tapaka PVC Kitapo vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra
Ny faritra ampitan'ny ravina plastika mihosin-kazo dia namaky na niditra tao anaty sela. Amin'ny teôria dia misy antony roa lehibe: Voalohany, satria ny tanjaky ny fiempo eo an-toerana ihany koa
Ny fitsipika sy ny fampiharana ny henjana PVC Plastika sombina
Ny plastika vita amin'ny sombin-javatra dia karazana fitaovana polymer noforonin'ny micropores gazy maro be niparitaka tao anaty plastika mafy, ary manana ny mampiavaka ny lanjany maivana, ny hafanana hafanana, ny feo
Enina fahitana mahazatra an'ny PVC Famolavolana birao
Ny toetra fanodinana ny PVC foam board dia sahala amin'ny an'ny fikarakarana hazo. Ilaina fotsiny ny misoroka ny hafanana vokatry ny hafanana miasa be loatra. Ao amin'ny
Makà vahaolana na serivisy fandroahana anio
Tianay ny mihaino anao! Mandefasa hafatra aminay amin'ny alàlan'ny endrika mifanohitra, na mandefasa mailaka aminay. Tianay ny mihaino anao! Mandefasa hafatra aminay amin'ny alàlan'ny endrika etsy ambany.
Sarimihetsika, tsipika fanamafisana ny takelaka
： Tsia. 28, Moyu Road, Distrikan'i Jiading, Shanghai, Shina
FANLYPLAS dia mari-barotra an'ny FANLYPLAS SHANGHAI CO., LTD